नजिक न्युज | मलाई छोरी नै हुन देऊ !
२०७८ बैशाख २८ गते मङ्गलबार | 11 May, 2021
मलाई छोरी नै हुन देऊ !
मलाई यो समाजमा पीडा हुँदा रोएर बस्नु छैन्, बिभेद हुदा संघर्ष गर्नुछ, अन्यायमा पर्दा त्यसको सामना गरेर न्याय खोज्नु छ । नारी भएर नारीका आवाजलाई बुलन्द तरिकाले उठाउनु छ । मेरो मनमा जरा गाडेको पृतिसतात्मक सोचलाई उखेलेर फाल्नु छ । हो एउटा छोरी मान्छे भएर इज्जत र आत्मसम्मानका साथ बाँच्नु छ । कसैको साहारा विना पनि एक्लै संघर्ष गर्न सक्ने बन्नु छ ।
छोरी भएकै कारणले मेरो १५ वर्षको भाइको सुरक्षामा हिड्नु छैन, मलाई छोरी भएर नै आत्मनिर्भर बन्नु छ । त्यसैले मलाई छोरी मान्छे भएर नै रहन देउँ । म पनि एक छोरी मान्छे हुँ, मैलै पनि छोरी हँुदाका दुःख, कष्ट, पीडा र लान्छना धेरै थोरै भएपनि भोगेकी छु, सुनेकी छु र त्यो भन्दा बढी देखेकी छु ।
एउटा महिला अर्थात छोरी मान्छेले विवाह पछि छोरा नभएकै कारण धेरै छोरी जन्माउनुको पीडा, परिवारले गर्ने व्यवहार र समाजले छोरा नभएकै कारण लगाइने लाञ्छना र हेर्ने दृष्टिकोणको र वहुविवाह गरेको सानैदेखि अनुभव छ । छोरी भएकै कारणले समयमै विवाह गरेर घर सम्हाल्ने संकार सिकाइन्छ, विवाह भइसकेपछि श्रीमानको घरमा जतिसुकै हिंसा, दुव्र्यवहार, शोषण हुदा पनि तिमी उफ समेत नगरेर इज्जतले बसेर घरवार चलाउ भनेर सिकाइन्छ ।
न कि तिमीलाई कुनै किसीमको दुःख पर्दा वा हिंसा हुदा तिम्रो पनि घर छ फर्केर आउ भन्न सक्ने आँट हाम्रा कसैका आमावुबा र दाजुभाइलाई नै छ । छोरी भएकै कारण जहाँतही आफ्नो समस्या भन्न पाइदैन । केही भइहाले पनि घर सम्हाल्न नसकेकी बिग्रकी आइमाईको संज्ञा दिइन्छ । यस्मा नै मेरो आपत्ती हो ।
त्यो सुदुरपारी र कणाली जस्ता ग्रामिण क्षेत्रमा हजारौ महिला अर्थात नारीहरु यहि पीडा लिएर बाँचिरहेका छन् । जतिसुकै हिंसा, दुब्र्यवहार भएपनि सहन बाध्य छन किनकी उनीहरु आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनन् । उनीहरुमा आत्मनिर्भर भएर बाँच्न सक्ने कुनै पेशा नै छैन् । किनकी उनीहरु अशिक्षित छन् दुनियादारी जानेको छैन । उनीहरुलाई २।४ जनाको अगाडि बोल्न त के ठाडो शिर गरेर उभिन पनि डर लाग्छ, ।
राजधानी लगायतका अन्य शहरका ठुला–ठुला होटेल र रेष्टुरेन्टमा नारीवादी समाज , नारी समानता र समान सहभागिताका कुरा गरिरहदा कताकता मनमा चसक्क बिझेर आउँछ । जबकी ति ग्रामिण क्षेत्रका नारीहरुलाई रातदिन गिट्टी कुटेर, रातदिन मेलापात र हाटबजारको भारी बोकेर छाक टार्न पनि धौधौ छ ।
छोरा मान्छे स्वतन्त्र रुपले दिनभरि डुलेर ,पाटीपौवा होटेल चौतारा लगायत विभिन्न ठाउँहरुमा शिक्षाका कुरा गर्छन, राजनीतिका कुरा गर्छन, परिवर्तनका कुरा गर्छन, आर्थिक र सामाजिक, राष्ट्रिय, अन्र्तराष्ट्रिय लगायत विभिन्न सन्दर्भका कुराहरु गरेर बस्छन् र राती अबेर घर फर्किन्छन् ।
सबै कुरा सुन्ने बुझ्ने र जान्ने सवै अवसर पाउँछन र भनिन्छ छोरो सबै कुरा जान्ने भलाद्मी भइसक्यो । र त्यहि जान्नेको भलाद्मी छोराले नै पछि हिंसा गर्छ, छोरी धेरै जन्मिदा छोराको चाहनाले बहुविवाह गर्छ । छोरी मान्छे कहिलेकाही घरवाहिर निस्केर अबेर आउदा दशौ प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । धेरै डुल्नुहुदैन, कसैका कुरा सुन्नुहुदैन भनेर सामाजिकरणमा रोक लगाइन्छ, अनि भनिन्छ छोरा मान्छे सक्षम हुन्छन् र तिनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् ।
कहाँ छ शसक्तीकरण ?
महिलाहरुलाई आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, र शक्तिको अनुभूति गराउने गरी सक्षम बनाइनुपर्छ । तत्कालिन असमान राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक संरचनालाई चुनौति दिन सक्नुपर्छ र त्यस्ता असमानतापुर्ण क्षेत्रहरुमा आमुल सुधार गर्न जरुरी छ । के हाम्रो समाज यसमा सहमत छ र ? के हाम्रो राज्य तथा स्थानीय निकायले यसवारे बनाइएका नीती कार्यवन्यन गर्न सफल छ र ?
महिलाहरुको विकास तवसम्म सम्भव हुदैन जवसम्म उनीहरुलाई पितृसत्तात्मकता र असमानतावाट मुक्त राख्न सक्षम तुल्याइदैन । शसक्तीकरणलाई केवल लिङ्ग सम्वन्धहरुसँग मात्र जोडिनु मात्र उपयुक्त हुदैन । बरु यसलाई महिलाहरुसँग सम्बन्धित एउटा मुद्दाका रुपमा लिइनुपर्छ ।
नारीवादले महिला र पुरुषवीचका असमानतालाई अस्वीकार गरेर महिलाको बौद्धिक एवं व्यवहारिक शसक्तीकरण गरिनुपर्नेमा जोड दिन्छ । महिलाहरु पितृसतात्मक व्यवस्थाद्धारा जहासुकै उत्पीडित छन् र हिंसात्मक रुपवाट समेत पीडित छन् । जबसम्म सत्ता, शक्ति र सम्पतिमा समान अधिकार र सहभागिता हुदैन तवसम्म शसक्तिकरण सम्भव छैन् ।
यसका लागि सवैको व्यक्तिगत आयमा बृद्धि,रोजगारीमा पहुँच, सम्पतिमा स्वामित्व, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, विभेद र असमानताको अन्त्य, समाजमा उचित स्थान ,घरायसी र अन्य निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता र स्वतन्त्रताको प्रत्यभुति गराउन जरुरी छ ।
महिला शसत्तिकरण सम्वन्धि थुप्रै कार्यक्रमहरु त थुप्रै चलाइए हाम्रा स्थानीय तहरुमा, कहिले महिलासँग उपमेयर कार्यक्रम चलाइए भने कहिले छोरीहरुका लागि छोरी । ती कार्यक्रमहरुले कति छोरीहरु अर्थात महिलाहरु लाभान्वित भए । यसले के साच्चिकै उनीहरु जीवनशैलीमा प्रभाव परेको छ कि छैन भनेर जाच्न पनि जरुरी छ । यदि छैन भने यसको आयाम वदल्न जरुरी छ । स्थानीय तहले निर्माण गरेका योजना र नीतिमा सुधार गर्न जरुरी छ ।
आफ्नो समुदाय, वडा, गाउपालिका÷नगरपालिका र जिल्लामा कति गरिव परिवारका छोरी अर्थात महिला मान्छेहरुले उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा प्राप्त गर्न पाएर सक्षम बन्न सके भनेर लेखाजोखा गर्न जरुरी छ । यदि पाएन भने किन पाउन सकेनन् भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न जरुरी हो । यसैका लागि हो संघियता ।
के समाज बदलिन जरुरी छ !
विकासको एक हिस्सा नेै हो शसक्तिकरण । हामी चाहन्छौ पुरुष महिला समान हुन । हामीले पितृसत्ता हटाउने प्रयास गर्यौ तर त्यसभित्रका परम्परागत सोच, ब्यवहार प्रचलन र प्रवृति हटाउन सकेनौ । नेपालमा लगभग ५१ प्रतिशत जनसङ्ख्या महिलाको छ, तरपनि कुनै न कुनै ठाउँमा अझै उत्पीडन र भेदभावमा छन् । प्राय सवै ठाउँमा असमानता छ ।
संविधानमा महिला र पुरुषलाई समान अधिकार दिइयो तैपनि व्यवहारमा त्यस्तो निर्णयको प्रभुत्व पुरुषमा गायो । त्यस्तै राजनीतिमा पुरुष नेताले संवैधानिक प्रक्रिया पुरा गर्न महिलाको नाम प्रस्ताव गर्छन तर महिला नेतृत्वमा स्थापित भएको हेर्न चाहदैनन् ।
नेतृत्व त्यहा चाहिन्छ जहा उत्पीडन हुन्छ । ग्रामिण क्षेत्रमा महिला उत्पीडन अत्याधिक छ । संविधानले जति नै अधिकार दिए पनि व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन । संघियताले गाउँगाउँमा राजधानी त ल्यायो तर त्यसको अनुभूति गर्न सकेका छैन ।
धेरै छोरी मान्छेले आधारभूत शिक्षा पुरा गरेपछि आर्थिक अभावका कारण प्राविधिक शिक्षा र उच्च शिक्षा हासिल गर्न नसकेर विचमै छोड्न वाध्य छन् । हरेक व्यक्तिका लागि उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने उपायहरुको वैकल्पिक खोजी गर्न राज्य र स्थानीय तहले जरुरी छ ।
प्रत्येक तहमा निर्णय प्रक्रियमा अर्थपुर्ण सहभागिताको प्रत्याभुत गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गरियोस् । सवैलाई सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गरी रोजगारी सिर्जना गरी आत्मनिर्भर वन्ने वातावरणको सिर्जना गरियोस् । जबसम्म महिलाहरु आर्थिक रुपमा सशक्त हुन सक्दैन तबसम्म समानता र समृद्धिको परिकल्पना पुरा गर्न सकिदैन ।
जिम्मेवारी र अधिकार दिने हरेक क्षेत्रमा उसको योग्यता, क्षमता र योगदानका आधारमा दिइयोस् नकि पारिवारिक सम्बन्ध, व्यक्तिगत नाता, हैसियत, वर्गका आधारमा । समान समाबेशीकतालाई आत्मसात गर्न जरुरी छ । सक्षम र सवल शसक्तिकरण यसैमा छ । पुर्वाधार निमार्णले मात्र विकास र समृद्धि हनै सक्दैन । सवैको धारणा बदल्न जरुरी छ ।
यसै सन्दर्भमा भारतीय मानवअधिकारकर्मी अर्थात नारीवादी अभियान्ता कमला भासिनले भन्नुभएको छ ।“हामीले चाहेको समाज पितृसत्ताको ठाउँमा मातृसत्ता चाहेको होइन बराबरी चाहेको हो” । चाहे त्यो सत्ता, सम्पति र शक्तिमा किन नहोस । हो हामीले चाहेको समाज पनि यहि हो ।
अन्तमा “महिलाको सम्मान, सुरक्षा र रोजगार समृद्ध नेपालको आधार” भन्ने नाराको सार्थक कार्यन्वयन गर्न सबै पक्षबाट सबल उर्जा मिलोस् शुभकामना !!
रावल पत्रकार महासंघ बाजुराका सदस्य र प्रेस संगठनका प्रदेश सदस्य हुन् ।
सोमबार २४, फागुन २०७७ ०७:३९ मा प्रकाशित
मनोविमर्शकता ओलीको सबैलाई अनुरोध !
बाजुरामा पीसिआर प्रयोगशाला सञ्चालनको तयारी
एक घर एक बैंक खाता : नेपालकै पहिलो नमुना गाउँपालिका घोषणा कार्यक्रम (फोटो फिचर)
महिला अबस्थाको विगत, वर्तमान र अबको बाटो
धनगढीमा आगलागी(फोटो फिचर)
बैतडीका १४ संक्रमितले कोरोना जिते, थप ८ जनामा संक्रमण
बाजुरामा थप १२ जनामा कोरोना पुष्टि, दुईको मृत्यु, संक्रमितको संख्या २१५ पुग्यो,
बाजुरामा थप २ जना काेराेना संक्रमितकाे ज्यान गयाे, ज्यान गुमाउनेकाे संख्या ४ पुग्याे
लकडाउनमा विरामी र सुत्केरी बोक्न लोक थापाले निजी गाडी उपलब्ध गराउने
बुढीगंगा नगरपालिका १ नम्बर वडा कार्यालयका विरुद्ध स्थानीय आन्दोलित
जिल्ला कारागार डोटीमा रहेका कैदी बन्दीसँगको भेटघाट बन्द
सेती अस्पतालमा उपचाररत थप ७ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु
थप ४४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि,संक्रमितको संख्या २०२ पुग्यो
बाजुराका यशराज खड्का सहित तीन युवाले बनाए सेन्सरयुक्त ह्याण्ड स्यानिटाइजर मेसिन
घट्टे खोलामा आएको बाढीले साँफे–मार्तडी सडक अवरुद्ध, २५ रोपनी जमिन बगरमा परिणत
जिल्ला अस्पताल बाजुरामा कोराेनाका कारण ५५ वर्षीया महिलाको मृत्यु
राजेश पायलद्धारा निर्देशित लघु चलचित्र कोरोना कहर सार्वजनिक (भिडियोसहित)
बाजुरा कारागारका कैदीबन्दी आन्दोलित
बडीमालिका–९ का वडाध्यक्ष विनोद कुमार विकको मृत्यु
बुढिनन्दाकी उपप्रमुख रेग्मीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि